Ezweni lanamuhla ekukhanyeni izenzakalo zamuva, izindikimba ezingasho bayavuswa ukuchaza engcupheni futhi ngokuvamile zonke izinsongo wezempi nokuvikeleka waseRussia kazwelonke. Ukuze kuxazululwe le nkinga kabanzi, kubalulekile ukuba uqale ukubhekana umqondo. Ukwaneliseka kwanoma iyiphi izithakazelo zezwe emhlabeni namuhla kungenxa isenzo mutual okuhambisanayo lamazwe e esiteji emhlabeni, ngosizo amabutho ngaphakathi kuleli ngokwayo. Ubuhlobo obunjalo busuke on the esengozini nokubambisana futhi baya - ngesikhathi esifanayo. Ngakho, singacabangela lesi simo njengoba umzabalazo ezivamile ukusinda. Ngakho-ke, iyiphi enye indlela, kodwa izwe kufanele inake izithakazelo mutual. Nokho, okungezona ukuhambisana imithetho yalo mdlalo noma ukunganakwa isimo eyodwa kuya kwenye ke kungase kubhekwe njengokwelapha usongo ukuphepha noma ubuqotho State, lokungenani ngekusho kwezomnotho.
Ngakho, ukulondeka kwezwe lempi usongo waseRussia singachazwa ngokuthi kungenzeka isicelo ngqo noma ngezinye izindlela ingozi inkululeko, wamalungelo, amagugu indawo, izinga kanye nekhwalithi impilo yezakhamuzi, ukuthuthukiswa, ukuphepha kanye ukuvikela isimo.
ukushayisana anjalo phasi ukuhlangabezana izinzuzo zalo kazwelonke futhi kuyisinyathelo sokuqala ukuba izinkinga ezihlobene nokuvikeleka. Nansi incazelo umqondo, kodwa ngesisekelo lokhu, kubalulekile ukuba uqaphele lokhu okulandelayo. In the ukungabikho kazwelonke isithakazelo usongo njengoba enjalo alikho, ngakho kungenziwa ke labizwa ngokuthi iyingozi, uqobo zingavela hhayi kuphela ngenxa yomsebenzi womuntu, kodwa futhi yemvelo, abenziwe abantu, kanye nezinhlekelele zemvelo.
Ngaphambi kokuba sicabangele ukuthi ukulondeka Russian Federation kazwelonke luqinile futhi lapho kuyadingeka ongakulindela ubungozi ukuqonda izinhlobo izinsongo.
Neqiniso usongo njalo kubhekwe ngesikhathi ucwaningo kanye nokuthuthukiswa yiluphi uhlelo. Naphezu uhlelo futhi isiqondiso salo, ezingozini ezinjalo kumelwe nakanjani ezizobalwa. Ngesikhathi esifanayo, izinsongo ngokushesha ezidinga ukuzibandakanya ngokushesha izinhlelo akhethekile "asizakale 'eliqinisekile lenkinga ukuthatha ezanele impendulo izinyathelo. Ngokuvamile Kugcwele Izinkinga ezinjalo okubeka lezi zinhlelo engcupheni nje ezingaba khona. Imithombo kungenzeka okubhekiswe, ukulungela inhloso ethize kanye maqondana focus womhlaba. Lesi sakamuva, esikhundleni salokho, kungenzeka kubangelwa yini emithonjeni yangaphandle kodwa futhi yangaphakathi kuphela, okuyinto sixoxa kabanzi ku isibonelo esikhethekile.
izinsongo Yangaphakathi ekuphepheni waseRussia kazwelonke
Okwamanje, izinsongo esikhulu ukuze zokuvikeleka wezempi zingahlukaniswa zibe okulandelayo:
luke luthi Social emphakathini kungaba omunye izingozi esiyingozi kakhulu. Lokhu ibhomu okuthiwa, okungase ukudabuka nganoma yisiphi isikhathi, njengoba nje igebe phakathi kwabacebile nabampofu, ifinyelela umkhawulo ezibucayi. Lokhu kusho ukwenyuka ukungezwani emphakathini, ukuthengisa ngomzimba, ukuluthwa utshwala, ukuluthwa yizidakamizwa, ingxenye yobugebengu.
Resource orientation, kulesi sibonelo, uwoyela negesi, yebo, ikuvumela ukuba abe ayezolithola lonke izwe, kodwa ngesikhathi esifanayo, kuyafaneleka ukuthi mayelana nanoma yisiphi ukukhula komnotho okusimeme ozinzile futhi inkululeko yokukhuluma basuke bengalweli angaya.
Ukuqinisa ukukhula komnotho igebe phakathi izifunda ezahlukene. Ngesikhathi lapho omunye esifundeni ophila ungcono abaphukile ezinye izibopho, futhi lena ungakuvumeli ukuba ukuhlanganiswa phakathi izifunda.
Ubugebengu isimo wonke umphakathi eRussia. Ukwanda yamuva e engenayo unearned, futhi lokhu kungabonakala nasemkhakheni wonkana, futhi eziqongweni amandla, esithinta nokuntengantenga jikelele kanye sezomnotho. Esimweni esinjalo, ukuletha emnothweni kazwelonke aphume nengwadla cishe kungenakwenzeka.
Izinkinga ezihlobene nokungawuvivinyi ngokwanele bezikhali yesayensi nezobuchwepheshe, njengoba isisekelo sokukhula komnotho. Eqinisweni, ukulondeka Russian Federation kazwelonke ukuba usongo ngokwanele sina ngenxa yokuthi bathi kule minyaka yamuva Russia akenzanga iminikelo esanele embonini zobuchwepheshe, ngakho kunesidingo umthamo lokucwaninga lingekho lapho.
ukubukwa separatist kuyizindawo ngabanye ukuthi usebenze ngesisekelo isakhiwo sikahulumeni.
luke luthi Inter-yobuhlanga kanye inter-yobuhlanga, okuyinto eminyakeni yamuva anda kuphela.
Inkinga kwedemografikhi kanye nokwehla impilo.
Uma sicabangela lelo gumbi zonke izinsongo zokuvikela ezingenhla, kuyacaca ukuthi ahlobene eduze ngempela. Uma uhlangabezana omunye bangaba usuku olulandelayo, nokunye kuze iketanga. Ukuqedwa kwazo zonke lezi zinkinga kuyadingeka ukuze kuqinisekiswe kulondolozwe wekuba sive. Kodwa ngaphezu izinsongo yangaphakathi, ukunakekelwa okukhethekile kufanele ikhokhwe futhi ngaphandle.
izinsongo sangaphandle ekuphepheni waseRussia kazwelonke
Ngokuqondene izinkinga kusukela ngaphandle, kuba lula konke okuningi, futhi kubonakala sengathi ezisobala, njengoba iningi izenzo zabo abathintekayo lonke izwe lonke. Phakathi lezi zingozi yilezi ezilandelayo:
Ukunciphisa indima eRussia zezwe zezombangazwe ukuphila futhi kwezomnotho, ngenxa yesenzo okwakuvunyelwene kokubili uthi ngabanye kanye nezinhlangano (isibonelo OSCE ne-UN).
ukunwetshwa Wendawo ku-China ne Japan.
Ukwanda njalo phambi NATO zempi.
Indawo eduzane Russia zamabutho empi, ikakhulukazi e-United States.
Ukwanda okwandile izikhali zembubhiso.
Ukuwohloka elala amazwe CIS, kuhlanganise Belarus ne-Ukraine.
ukuzivikela wezwe crisis ezingaba khona.
Ukuvela njalo ukuhilizisana ezempi kanye eduzane emazweni CIS, isibonelo esicacile esibucayi e-Ukraine futhi Icebo lika lempi 2013-2015 ,.
Mandle isikhundla emkhakheni wezokuxhumana, ngenxa inombolo yamazwe ukuthi ukutshala empini ulwazi izimali omkhulu.
Ukuqalisa of the Russian Federation nezinhlangano zasemazweni angaphandle, okubizwa ngokuthi izinhloli bezingosi yesihlanu.
Ngakho, izinsongo zangaphakathi nezangaphandle ngempela zidinga zokuqapha njalo ukuqinisekisa ukuthi ukuphepha lalibuswa.
Ukubonakaliswa US izinsongo (iMpi Yomshoshaphansi)
Eqinisweni, ezama ukubonisa isimo sengqondo esinenzondo asifuni phezu ingxenye US ubelokhu njalo futhi lokhu kufakazelwa amaqiniso amaningi, futhi enjalo aqondisa kusukela hlangothi izoqhubeka. A ikhambi lezombusazwe kule nkinga akunakwenzeka ukuba kutholakale, njengoba izithakazelo Russian Federation ne-United States basesimweni izindiza ohluke ngokuphelele, futhi ukuqonda ukuthi kwenzekani. Kodwa, njengoba ochwepheshe sekushiwo, iMpi Yomshoshaphansi akuyona ngempela phezu, kodwa kwadingeka nje ukuthatha ikhefu emfushane amandla amasha ukuze ushaye at Russia.
Kuningi okungase ezisikhanyisela yakamuva chess castling eMpumalanga Yurophu ne-United States unesithakazelo kuzo zonke lokhu. Naphezu kweqiniso lokuthi e-CIA has 4 base ngaphandle Melika, amapulani kungenzeka ukwakha enye eduze komngcele Russia, okungukuthi ku-Ukraine.
Njengoba singabona kusukela isimo yakamuva kuleli zwe, isakhiwo Ukrainian omunye isici ezingasebenzi ewubuciko, zamanga futhi konke ebonakalayo nowokwambulelwa noma ukwedelela owayengumongameli waseRussia, noma isimo sisonke. Uma database CIA ivuliwe ke Melika bazokwazi ukuqhuba ingxoxo nge Russian Federation, uma ungakakwenzi kakade phezulu, ngesikhathi amathoni beqiniseka. Ngakho, umshayeli kuyodingeka imingcele, isakhiwo ephezulu esungulwe, okuyinto isungule oda ayo emazweni angaphezu kuka-40.
Lo ukungqubuzana in Ukraine njengoba kubeka engozini
Ukuthinta ngesihloko esithi "Isitha ngesikhathi Amasango" Yiqiniso, kuyafaneleka ukuthi kazwelonke zokuvikeleka wezempi izinsongo waseRussia babé ezibucayi emva ukungqubuzana e-Ukraine, futhi leli nothi, amasevisi afanele emhlabeni.
Ngakho, sicabanga ukuthi izinhlelo kahulumeni kakhulu ezweni "yeningi" emhlabeni (ngokusho kwakhe efanayo), ngempela kuwufanele ukwakhiwa elisekela e-Ukraine. Kuqakatheke ngani nokuthi ngeke eqinisweni? Empeleni, impendulo itholakala hhayi kuphela e-control geopolitical yesifunda. Yiqiniso, kuleli zwe, into yokuqala ukuqeqeshwa isikhungo esikhethekile ezizivelelayo amaphekula izokwakhiwa, ukuze kamuva bathunyelwa Russia ukubuyisela sifo. Kulokhu sikhuluma labo kubantu abasha abakwazi ideologically iphathwa kusukela 90 zokuqala. Manje, cishe abangaphezu kwesigamu bantu abanobungane, lobuzalwane kanye izwe united aseSoviet Union ibheka ERussia iyimpande yesono, futhi isitha esikhulu, ujabulisa ngempela ukuya ufunde ukubulala isitha US landfills.
Ezizivelelayo izinhlangano amaphekula
Hhayi inkinga usongo lobuphekula futhi radicalism kungaba ihlolwe. Umsebenzi oyinhloko zalezi zinhlangano kuyinto eziya ziba zimbi degrees voltage eyenga iziyaluyalu, isiyaluyalu nayo yokwesaba emphakathini, isidingo nithintithe isimo kanye isimo esishubile.
Njengoba sazi, akukho bufakazi ngqo ukuthi US isikali zezimboni kudala amaphekula, impela eningi, kodwa umphakathi wezwe lonke ngandlela-thile njalo kuvela amehlo (ngezizathu ezingaziwa). Ngo-Afghanistan, kwaba-al-Qaeda kanye nezenzo kwalo okuhloswe ngokuqondile i-USSR. Ngemva kokuwa isidingo walala, bese wabulawa kanye double CIA ejenti Osama bin Laden njengoba ubufakazi ezingaphezulu nezingenasidingo kakade, kodwa phambili ekukhulumeni kwabezindaba, yena yondliwa njengoba №1 amaphekula.
Yini esiyibonayo emhlabeni namuhla? Libya, Syria, Ukraine, bese lokho? Futhi esilandelayo sizobe Russia nase Melika kuyosiza kule LIH. Ngakho, singasho ngokuqiniseka ukuthi usongo lobuphekula ngokuyisisekelo eyodwa kuphela "yeningi" isimo, okuyinto ezicashe i fighter oshisekayo ngokumelene lezi zakhiwo uqobo futhi kudala ingozi.
Naphezu kweqiniso lokuthi base NATO egcwele umhlaba wonke, kwaba nobutha ngqo eRussia cishe iqedwe. Ngakho-ke, kusukela kule block abasondelene zero ukulondeka kwezwe lempi izinsongo waseRussia. Lokhu kungase kubonise eziningi amaqiniso, futhi-ke, akukhona indima yokugcina eyadlalwa Russian "isibhakela enuzi". Akekho ofuna lahlwa iplanethi ukunqunyelwa ukufa, kuvulwa Southern naseMpumalanga Front nje kungase kuholele lokhu. Yiqiniso, lokho akusho ukubeka eceleni amathuba iqhaza ngqo iyunithi, uma Russian Federation namanje ongamelana nokuvinjelwa kwezomnotho kanye unswinyo, kodwa, futhi, ngeke ukuvula, futhi umsebenzi komhlaba ekulungiseleleni amasosha, zamaphekula ukudlulisa ukuba insimu. Kodwa, noma kunjalo, ezifana izinsongo lempi kwangaphandle NATO, elingangena ngokuphepha kumelwe libhekwe njengelingcwele ezingaba
usongo Economic (unswinyo)
Ngokuhamba izenzakalo zamuva, ngingathanda ukuba siqonde ukuthi kungani uthi ezweni elikhulu, abacebile oluqinile uhlushwa emnothweni ngenhloso? Inkinga okulandelayo, njengoba besho, "kwafika enkingeni ngenxa elinde." Russia Modern - material neseleko ebomvu emnothweni, kodwa okungezona ezakho, sikhuluma nokuthengiswa. unswinyo igalelo kwaba lohleliwe ngakho futhi palpable, ukuthi zonke izikhali emhlabeni ababehilelekile. Lokhu kwehliswa yokufakelwa kwamanani kawoyela kusukela Arabhu sithi, kanye imikhawulo owethulwa eYurophu. Umnotho Russian Modern abaningi abangazinaki izidingo yisakhamuzi, njengoba kwakunjalo eminyakeni engu-20 edlule. ibhizinisi Modern uqobo ukhiqiza singenele futhi ngokuvamile zimane nje ethengisa izinto iluhlaza noma, okubi kakhulu, izimpahla amazwe. Ngakho-ke, ukugcizelela wabekwa umkhakha sengozini kakhulu futhi ezibalulekile. Kufanele abhekwe njengendoda negalelo ubuyisele emakethe empumalanga, ukuthi nje sekwephuzile ukubona, ngaphandle kwakungenakwenzeka ukuba uzibone kusengaphambili lesi sinyathelo?
Yiqiniso, ubuphekula - basongela ukulondeka kazwelonke Russian №1, kodwa uma ubheka esikhathini esizayo esiseduze, le nkinga ungakwazi wengeze abanye abambalwa, hhayi kangako. Kakade kusukela 2015, Russian Federation kungaba enhliziyweni ukulwa "kwaze kwaba sekufeni" ingcebo yemvelo. Izwe isibe multipolar ukuze kabusha kusuka polycentrism waqala ukuntengantenga ukukhula, ekuncintisaneni okushubile phakathi izikhungo ezintsha kwamandla. Ezweni lanamuhla engena ku enye yezinto ezinzima kakhulu nezikhathi ukubalwa kwabantu, ezemvelo kanye lezimpahla. Russia kulesi simo - umdlali obalulekile kakhulu, ngenxa yayo isikhundla geopolitical. Futhi akukho usongo lempi akuyona ezimbi kuphela uma kubhekwa njengento alinganayo, njengoba kwaba njalo endabeni ka-Russia - lapho ukwesaba. Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi ziningi kangakanani imizamo ngideleleke yayo geopolitical nokuma kwezwe noma aphethwe, bonke bazokholwa sihlehliswe. Kodwa ngenxa yokuthi ukwanda fuel eluhlaza njalo okwandayo, futhi uwoyela negesi zizohlala main yamandla abe ingxenye wabikezela of 84% ngonyaka wezi-2030, ngenkathi Russia kuseza. Ingozi kuphela wukuthi iRussia ezicishe zibe 16 uthi, okuyinto manje bese uzama ubukeza kwemingcele yabo.
Yiqiniso, ubuhlobo the Kremlin sika nge Brussels naseWashington ngeke kuphinde kufane futhi. Esabela osongweni NATO, kazwelonke system ukuzivikela missile US, unomphela "umbala" linemibhikisho emazweni amaningana okuthunyelwe ngempela namaSoviet futhi imingcele ERussia uhulumeni kuvuselelwe imfundiso, othi mayelana nesimo kazwelonke zokuphepha. Ngokusho kwale dokhumenti, ekuphenduleni ukuphikiswa maduze ukulandela, ngakho izwe lonke angalali ubuthongo futhi Ungakhathazeki ngekusasa labo.
Bangaki abantu abafa e-Ukraine ngo-impi engamenyezelwe?